> Resource > Windows > dayactir Khaladaadka Screen Windows XP Black
Shaashadda Computer tagaa madow ee Windows XP
waxaan sida caadiga ah waxaan ahay qofka oo wuxuu diyaariyaa kombiyuutarada ee guriga .. iyo mid ka mid ah uu leeyahay dhibaatada oo aan sameeyo ma garanayo waxa la sameeyo .. Marka hore markii aan u celin waxa ku muujinaya ah xawaaladaha Windows XP ka dibna kombiyuutarka screen tagaa madow, waxaan isku dayay inaan ka socda hab nabad ah, laakiin ma aysan ka shaqeeyaan. Ma aqaano waxa ay sameeyaan wax walba oo aan isku dayay oo wali waxba.
Waxaa jirta waddo waxaad heli kartaa isku day ah markii aad la kulanto prolem this. Dami your computer iyo qaato ka mid ah batariga haddii aad isticmaalayso laptop ah. Markaasuu ku qaban oo sug oo ku saabsan labo daqiiqo. Ka dib markii in, furaysto your computer, batteriga celin iyo bilowdo your computer. Waxa ay noqon doontaa mar caadiga ah.
Qof ayaa sheegay in ay u shaqayso, laakiin qof kale ma ahan. Si kastaba, waxa aad isku dayi kartaa. Haddii aan shaqayn oo aad u. Waad u baddelen kartaa hab kale, iyadoo la isticmaalayo qalab kabashada Windows si jiid aad Windows XP caadi ah dib u. Wondershare LiveBoot Boot CD / USB noqon kartaa doorasho fiican, kaas oo awood kuu inay kabaha your computer si habsami iyo hagaajin shaashadda XP madow daqiiqo.
3 talaabooyin lagu xalinayo baadi shaashadda madow Windows XP
Ka dib markii uu iibsigu barnaamijka, waxaad heli doontaa link download ka Wondershare ah. Download oo ku xidh on a computer-wanaag shaqo. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah Downlaods CD ama USB drive iyo hagaajin Windows XP shaashadda madow 3 tallaabo.
Step1. Guba ah Downlaods CD / USB drive
Geli CD maran ama USB drive galay kombiyuutarka meesha aad ku rakiban oo ay maamulaan Wondershare LiveBoot 2012 ah. In interface saaxir hoos ku qoran, waxaa jira Hanuuniyaa warramayay sidii ay u abuuraan Downlaods CD ama USB drive aad. Dooro mid aad u, oo riix badhanka gubashada ee xarunta. Ka dib markii ilbiriqsi, a Downlaods CD / USB drive la abuuri doonaa. Qaado soo tago iyo in tallaabada xigta.
Waxaad tahay tallaabo 2aad hadda. Leexo on your computer in aad tahay oo ku saabsan in la dayactiro nidaamka. Geli ka Downlaods CD / USB drive iyo computer ka guuleysatey. Marka Windows billaabo in uu ku shuban, si deg deg ah wax miiran F12. Markaas waxaad heli doontaa galay Menu Device Boot ah. Dooro ikhtiyaarka ah "suuro ama USB CD-ROM Drive", ka dibna waxaad heli doontaa menu ah sida ay raacaan dhowr daqiiqo ka dib. Dooro "Boot ka LiveBoot" in ay galaan your computer.
Step3. U dayactir Windows XP shaashadda madow
Si aad si guul leh u helaan your computer, waxaad u baahan tahay inaad sugto dhowr daqiiqo. Ka dib markii geting in, ordo Wondershare LiveBoot 2012 iyo tagaan "Windows Recovery" <"Boot Shil Xalka". Halkan waxaad ka heli doonaa xal buuxa u hesho XP qalad aad shaashadda madow. Qaado Beegidda adigoo raacaya habka hoos ku qoran.
Marka dhibaato ma guurtada ah, uga / USB LiveBoot CD ah drive, iyo computerka aad sida caadiga ah. Markaas waxaad ka heli doontaa in aad kabaha kartaa laptop ilaa si guul leh.
Windows Vista Black Screen of Death la Mouse Kursor
Sida loo Xalliyaan Computer Black Screen on Boot